Hang Glider ~ Journey-Assist - Sidina sidina glider
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Sidina Mifohaza » Hang glider
Ireo karazana fitsaharana
The Tour Tours
Travel ny tantely
Any ivelany 🙂
Asa fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana ny raharaham-barotra
Fanabeazana sy foto-kevitra
Toerana fitodiana malaza
13 Jolay, 2019
Deltapalan - fiaramanidina tsy mandeha amin'ny alàlan'ny fizotran'ny «tailless», misy elatra miendrika zana-tsipìka. Izy io dia ahitana rafitra fampiatoana sy ny elany. Misy karazana telo - fiofanana, klioba sy fanatanjahantena.
Fandraisana fitantanana glider
Ny fitaovana dia fehezina amin'ny sidina amin'ny alàlan'ny famindrana ny afovoan-marobe noho ny hetsiky ny mpanamory fiaramanidina mifandraika amin'ny teboka fampiatoana. (ankavanana - havia). Amin'ny lafiny mitsangana, ny fanaraha-maso lehibe dia aseho ao amin'ny fahafahan'ny mpanamory mba hahita sy hisambotra fiakarana miakatra, ary hahazoana tombony amin'ny fandaniana azy. Miankina amin'ity fahaiza-manao ity ihany koa ny haben'ny sidina.
Manantona ny glider toetra
Ny hafainganam-pandeha "valindrihana" amin'ny alàlan'ny 120km / h. Fa amin'ny ankapobeny, ny glamanty mihantona dia mahavita eo ambanin'ny fepetra sasantsasany saika mamirifiry ny toerana.
Lanjan'ny lanja - 30kg (misy modely amin'ny 25 ka hatramin'ny 55kg)
Ny elatry ny elany dia 10m eo ho eo.
Ny haavon'ny fisondrotra amin'ny hantan'ny mpanantona dia voafetra tsy amin'ny alàlan'ny hang glider toy ny fitaovana ary ny mpanamory (raha manana fitaovana mety ianao dia afaka miakatra mihoatra ny 5000m).
Ny elanelan'ny sidina antonony dia 50-100km. Raha ny traikefa, ity elanelana ity dia mety ho 500km. Range record - 765km.
Saika ny aerobatics rehetra dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny gliding glider ihany koa.
Ireo mpanamory hangatsiaka dia mazàna miaraka amina rafitra manavotra parachute ho an'ny mpanamory sy ny glider izany. Izy io dia mipetraka ao amin'ny kitapo faran'ny rafitra fampiatoana.
Manantona fitaovana sy fitaovam-pandrefesana
Rafitra fampiatoana (natao hametrahana ilay mpanamory teo ambanin'ny mpanantona)
Aza adino ny parachute (ny haavony ambany indrindra amin'ny famoahana ny parasy - 50 m)
Fitaovana fiarovana (fehikibo indrindra).
Fitaovana - Fivarotan-tena (tondro fatratra), GPS-navigator, raha tsy te ho very ianao 🙂
Fanatanjahantena azo antoka, kiraro sy ny fonon-tanana.
Fototry ny Glider Hang
Esory Mba hanombohana ny goavambe mihantona dia matetika ny tehezan-kavoana na tendrombohitra iray, na noho ny tsy fisian'ny divay toy izany. Ho an'ny fanararaotana dia mihazakazaka ny mpanamory, mitondra ny elany amin'ny toerana ilaina amin'ny fialana, ary miala. Mandritra ny fiatoana dia andramo manindry ny deltopalan amin'ny lanjanao, ary mihena hatrany mandra-pahatonganao ny hafainganam-pandehan'ny elany. Aza manandrana manapoaka! Satria raha tsy ampy ny hafainganam-pandeha amin'ny fiatoana, dia azo antoka fa vokatr'izany, fenoy ny glider mihantona, ary raha ampy ny hafainganam-pandeha, dia esory tsy misy hitsambikina.
Alohan'ny hametrahanao ny fanombohana voalohany dia mila mihazakazaka tsara miaraka amin'ilay mihantona mihantona eny an-tany ianao, manandrana mihazona torolàlana nomenao ary hisorohana ny horonan-taratasy mankany amin'ny sisiny.
Landing. Aza adino, rehefa milatsaka, mandroaka aloha ny hafainganam-pandehan'ny elatra, ary afaka mahazo miverina ianao. Ny fanamorana mety dia tsy misy jogging, tsy manakana ny sisiny sy ny tafahoatra mitovy aminy.
Safidio ny lalana tsara amin'ny fomba hianaranao. Tsara kokoa ny mametraka glita mihantona amin'ny rivotra. Fadio ny miangona eo amin'ny hazo fijaliana ary, indrindra fa amin'ny rivotra.
Alohan'ny hanandrahanao manidina ny tenanao, dia aza atao tsinontsinona ilay pre-sidina mifanaraka amin'ny mpampianatra. Ary ny olona tsy eken'ny mpanazatra manam-pahaizana dia tsy mahazo mifanidina samirery.
Tsy nofoanana ny fiarovana! Aza manao tsinontsinona ireo fitaovana miaro. Ny tsy fanarahana ny fepetra fiarovana dia mety hiteraka ratra manokana ary na dia ny fahafatesana ihany aza.
Aza adino fa ny kilalao mihantona fotsiny dia tsy kilalao fotsiny fa tena fanatanjahantena mahery vaika. Atoana ihany koa, aroso, fa ilaina ny mandrindra ny mety hisidina amin'ny alàlan'ny dokoteranao. Koa satria ny aretim-po, ny scoliosis, ny maso tsy mahita, dia contraindications hangina gliding.
Sidina mando (fomba)
Mpanantona hidera moto
Education. Ezaka voalohany
Aerobatics amin'ny lamba glitaire
Fihaonan'ny elatra glider
Tsara indrindra eto an-tany seza for hang gliding
пляж Oldeniz, vorontsiloza
vondronosy Bazaruto Mozambika
Danyang, Korea Atsimo
tanàna Casteluccio, Umbria, Italia
Antananarivo Cape Byron Aostralia
dune in Pile, Gironde, Frantsa
Cape Town Afrika Atsimo
04.06.2020 / fanehoan-kevitra tao Meksika tsy misy